Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Statistisk läsbarhet Word
1.3 Statistik Läsbarhetsstatistik
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoe Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanovino matika fahra matika araika Paper Rater ity manaraka ity:
Bäst av alla? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adirey ianao, dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Mihoatra noho ny azo inoana, dia efa mampiasa safidy fanamarinana ny fitenin’ny teny ianao. Na izany aza, azonao atao koa ny manome lalana ny Flesch Läs Ease sy Flesch-Kincaid Level Level i Microsoft Word.
Ampifanaraho amin’ny manaraka ny baiko etsy ambany. Ireo toro-lalana ireo dia hiasa ho an’ny MS Word 10 och MS Word 2013.
Voalohany, tadiavo ilay boaty manaraka ny "Manamarina ny fitipi-pitenenana amin’ny tsipelina." Ity boaty ity dia tokony ho voamarikao mba hahafahanao mametaka antontan’isa.